Famotrahan-tena ny faminganana ny hafa… | NewsMada
Famotrahan-tena ny faminganana ny hafa…
Par Taratra sur 14/08/2018
Tsy fanaovana kajikajy politika intsony, hono, izao fa efa fiatrehana fifidianana. Ny eo anivon’ny fitondrana no misy mahita sy milaza izany. Raha mba izay tokoa moa? Saingy tsy arakaraka izay lazaina ny zava-misy sy ny atao. Amin’izao aza, vao tena mandeha ny kajikajy sy paipaika politika. Tsy fahatokisan-tena amin’ny fifidianana?
Ny zava-doza, tsy izay mahametimety ny tena no imasoana fa ny faminganana sy famotehana ny hafa. Efa manahy tsy ho afa-mankaiza firy ny sasany ka mibahan-dalana, na atao izay tsy handehanan’ny hafa. Izany ve no hoe matanjaka indrindra, ohatra? Na efa vonona sy niomana hatramin’ny ela, manana mpikambana sy vahoaka mpanohana…
Nahoana, ohatra, no giazan’ny fitondrana ho azy irery ny haino aman-jerim-panjakana? Tsy fahatokisan-tena, hakanosana… Paipaika sy kajikajy politika tsotra izao. Efa misy koa izao ny karazana gazety zaraina maimaimpoana, tsy mahavita milaza tena loatra. Tsy izay hataon’ny tena no hazavaina fa ny hafa ahina sy atahorana no tsikeraina.
Raha fifidianana malalaka sy madio: tsy izay mahametimety ny tena eo imasoan’ny vahoaka hitsara sy hifidy ve no imasoana fa tsy fanapotehana sy fanaratsiana ny hafa? Fandresen-dahatra ny mpifidy handatsa-bato ho an’ny tena izany, fa tsy fanaratsiana ny hafa tsy hofidin’ny olona. Na misy tokoa aza ny ratsy, aleo ny vahoaka hitsara.
Eo ihany ny tsy fahatokisan-tena? Misy efa ratsy na aloam-bahoaka ary tsy hita izay hanarenana sy hanafenana izany, na hanamarina sy handoka tena toy inona aza. Tsy mahagaga raha manaratsy ny hafa. Ny ratsy, efa ratsy rahateo fa ny tsara no mila haratsiana. Izay atahorana ho lasa na hisongona ny tena no sakanana?
Na izany aza, mamandri-tena izay mamingana ny hafa: mamotra-tena aza… Tsy arakaraka ny anaovana izany aza ve no vao mainka itiavan’ny olona… finganina? Eny, na eo ihany aza ny hoe: mba tokony ho tsangan-kevitra amin’izay no hisafidianana fa tsy tsangan’olona. Mbola mila fifandresen-dahatra koa izay? Alao hery àry dieny izao…